Ny tombony amin'ny marketing dizitaly - Victor Mochere
Ireto ny sasany amin'ireo tombony amin'ny marketing dizitaly.
1. Tonga tsara kokoa
2. Misokatra foana ny Internet
3. Fampitomboana ny fahafantarana ny marika ho an'ny orinasa madinika
4. Raiso ny orinasanao iraisam-pirenena
5. Afaka mikendry mpihaino tonga lafatra
Amin'izao fotoana izao, olona maro eran'izao tontolo izao no mandany ny fotoanany amin'ny fijerena Internet sy mitady ny vokatrao. Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny findainy hanaovana fikarohana an-tserasera alohan'ny hividianany fivarotana. Araka ny fantatsika rehetra, ny marketing dizitaly dia mikasika ny fanatratrarana ny olona mety amin'ny fotoana mety Amin'ity dingana ity, Pay Per Click Marketing, Social Media Marketing, Search Engine Optimization, Content Marketing, ary fanampiana maro hafa amin'ny fampitomboana ny fisianao an-tserasera.
Satria azon'ny mpihaino anao 24/7 ny Internet. Afaka miditra amin'ny tranokalanao izy ireo isaky ny te-hiditra ao ary mianatra momba ny orinasanao. Tombontsoa ho an'ny orinasanao izany satria misy foana ny orinasanao. Azon'izy ireo atao ny mijery ny orinasanao ary mianatra bebe kokoa momba ny fikambanana sy ny serivisinao tsy mila miandry mandra-pisokafan'ny orinasanao. Mahasoa ho an'ny orinasanao izany satria samy manana ny fandaharam-potoanan'ny asa, ny torimaso ary ny fiaraha-monina ny mpanjifa tsirairay.
Ny marketing nomerika dia vintana tsara ho an'ny orinasa. Ny orinasa lehibe dia mampiasa marketing nomerika mba hahafahan'izy ireo mijoro amin'ny tontolo mifaninana. Ny olona amin'izao fotoana izao dia mihevitra ny fisian'ny marika an-tserasera ho toy ny antony lehibe indrindra amin'ny fahatokisan'ny marika. Manomboka mahafantatra ny marikao ny olona, ​​rehefa manolotra azy ireo izay tadiaviny ianao, dia mitombo tsikelikely ny lazan'ny marikao. Toy izany koa, ny orinasa madinika dia mampiasa ny varotra an-tserasera mba hirosoana amin'ny tsena ary hamoronana fanentanana marika eo amin'ireo orinasa lehibe. Noho izany, tsy afaka manana paikadin'ny marika mety ny orinasa, raha tsy misy paikady ara-barotra nomerika mety.
Ny maha-zava-dehibe ny marketing dizitaly dia tonga amin'ny fomba lehibe rehefa tonga amin'ny fahazoana ny orinasanao any ampitan-dranomasina. Miaraka amin'ny fanampian'ny serivisy marketing dizitaly, afaka miara-miasa amin'ireo mpanjifa iraisam-pirenena ianao ary mifandray amin'izy ireo hanitatra ny orinasanao maneran-tany.
Tombontsoa lehibe tokoa ny fanatonana ny mpihaino mety amin'ny orinasanao. Izany indrindra no manampy ny marketing digital ho tratrarina. Ny marketing dizitaly dia manampy anao hitondra fifamoivoizana mendrika kokoa. Mahatratra mpitarika liana amin'ny orinasanao ianao. Ny fahafahana mikendry fitarihana manokana dia manampy anao hitondra fifamoivoizana izay mahaliana ny orinasanao.